Stree oo todobaadkiisa 5-aad ka lacag badiyay filimo waa weyn oo 300 Crore gaareen cimri ahaantooda!! – Filimside.net
Stree oo todobaadkiisa 5-aad ka lacag badiyay filimo waa weyn oo 300 Crore gaareen cimri ahaantooda!!
October 10, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: October 10, 2018
Ka sheekeynta arimaha ganacsiga aflaanta mararka qaar waxay noqdaan kuwo la yaab reebo waana sida kaliya ee lagu qayaxi kari waxa uu tiyaatarada ka sameenayo filimka yar ee lagu magacaabo Stree.
Shraddha Kapoor iyo Rajkumar Rao filimkooda Stree ayaa todobaadkiisii shanaad keenay 4.28 Crore (Trade Figure) wuxuuna ka lacag badiyay filimada 300 Crore darajo ahaan gaareen sida Sanju, PK, Bajrangi Bhaijaan iyo Sultan!
Stree hore wuxuu noqday filimka 10-aad ee todobaadkiisa afaraad lacagaha ugu badan soo xareeyo haatana wuxuu noqday filimka 12-aad ee lacagaha ugu badan soo xareeyo todobaadkiisa 5-aad waana guul taariikhi ah oo uu mashruucan yar gaaray.
Marka la fiiriyo 15-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen todobaadkoosa 5-aad midka ugu yar ee liiskan ku jiro miisaaniyad ahaan waa Stree inkastoo filimada Chak De India iyo Taare Zameen Par iyagana miisaaniyad xar xambarsaanayeen xiligoodii balse labadan filim Shah Rukh Khan iyo Aamir Khan ayaa kasoo muuqdeen taasi oo meesha ka saareyso in lagu tilmaamo aflaan yar yar.
Fadlan hoos kaga bogo 15-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen todobaadkooda 5-aad ayadoo Stree kaalinta 12-aad fadhiyo:
1. Bahubali – The Conclusion (2017) – 12.41 Crore
2. 3 idiots (2009) – 9.83 Crore
3. Dangal (2016) – 8.62 Crore
4. Gadar – Ek Prem Katha (2001) – 7.18 Crore
5. Bahubali – The Beginning (2015) – 6.60 Crore
6. Lage Raho Munnabhai (2006) – 6.41 Crore
7. Padmaavat (2018) – 5.97 Crore
8. Tiger Zinda Hai (2017) – 5.81 Crore
9. Aashiqui 2 (2013) – 5.80 Crore
10. Taare Zameen Par (2007) – 5.39 Crore
11. Chad Ke India (2007) – 4.38 Crore
12. Stree (2018) – 4.28 Crore
13. Bajirao Mastani (2015) – 4.25 Crore
14. Dhoom 2 (2006) – 4.24 Crore
15. PK (2014) – 4.17 Crore
Waxaa Aqrisay 687